Sefa chitoro, iyo Prisma nyowani inouya kuApp Store | IPhone nhau
Prisma inosanganisira yekuchengetera chitoro mune yayo nyowani application
Ngirozi Gonzalez | | IPhone maapplication
Mapikicha ekugadzirisa mapurogiramu akarova paApp Store. Mazhinji acho anosanganisira zvemukati zvinogona kutengwa mukati senge mabrashi akasarudzika kana mamwe mabasa. Ndichiri kurangarira gore rapfuura apo munhu wese ainetseka kuti chishandiso chii chakashandiswa kuwana mifananidzo yakanaka kudaro, iko kunyorera kwaive Prism, chimwe chishandiso chakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo panguva iyoyo. Kunonoka kwayo kwakabvunzwa, kunyangwe gare gare Prisma labs ivo vakakwanisa kumhanyisa nguva yekugadzirisa nekuita kwavo kunyorera. Nhasi, iko kunyorera kwagadziriswa kuwedzera chitoro chesefa uye chishandiso che rega vashandisi vanonyanya kushandira vagadzire avo mafirita.
Prisma, yekuvandudza uye yekutanga application, inovandudzwa
Prisma inoshandura mafoto ako kuita mabasa ehunyanzvi uchishandisa maitiro evatambi vane mukurumbira: Munch, Picasso… pamwe nezvishongo zvine mukurumbira pasi uye dhizaini. Musanganiswa wakasarudzika wemagetsi network uye nehungwaru hwekunyepedzera zvinokubatsira kushandura nguva dzisingakanganwiki kuita hunyanzvi husingaperi.
Sei Prisma akabudirira panguva iyoyo? Hapana chimwezve uye hapana chakaderera nekuti yaive yekuvandudza. Inovandudza mupfungwa yekushandisa tekinoroji iyo mashoma mashandisiro akange ashandisa kusvika panguva iyoyo: njere dzekunyepedzera uye neural network. Kubudikidza neiyi netiweki network, ivo vanogadzira vakakwanisa kugadzira chirongwa chinoongorora mumwe nemumwe mufananidzo uye vachichiita chakasiyana zvachose nemanyorerwo evapendi vazhinji. Uye zvakare, vakaunza mafirita anoshamisa ayo nanhasi achiri kushandiswa nevazhinji vashandisi vanoshanda veiyi app.
Nhasi, Prisma yakagadziridzwa kuisa chitoro chesefa, chishandiso chinounza zvimwe zvakawanda kubva kune zvigadzirwa zvevashandisi. Zvakare, Prisma labs (iye anovandudza) akavimbisa iyo kuwedzera kwevhiki kwevhiki mafirita uye masitaera, pamwe kupera kwevhiki kwese. Muchitoro chesefa, vashandisi vekushandisa vanozokwanisa kugovana uye kuvhota pamastaera avanonyanya kufarira, kuti vape vashandisi vatsva iyo kudiwa kwevamwe vashandisi vanoshanda.
Kune rimwe divi, ivo vakagadzira iyo online platform umo vashandisi vanoshandisa application zvakanyanya gadzira yako mafirita uye masitaera uye uzviise kuchitoro. Vanhu vashoma chete ndivo vanokwanisa kuzviwana, kunyangwe mune ramangwana chimbo chinouya kuPrisma kune vese vashandisi
Prisma Mufananidzo weMharidzovakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Prisma inosanganisira yekuchengetera chitoro mune yayo nyowani application
Ming-Chi Kuo: ese iPhone 2017 ichave neMheni yekubatanidza uye nekukurumidza kuchaja USB-C
McDonalds inoronga kupa vashandisi kuodha uye kubhadhara chikafu neapp yayo